(Hadhwanaagnews) Thursday, June 14, 2018 12:33:52
Dowladii aynu dooranay ee uu hogaaminayay madaxwayne muuse umay suurta galin inay soo afjaraan shaqaaqada ka taagan beelaha
Sidaynu ka warhayno dalkan jamhuuriyada Somaliland waxuu galay xaalado adag, xaladahaasoo soo wajahday doorashadii madaxwayne muuse kadib.
Intii la doortay madaxwayne muuse dalkan waxaa soo weeraray dowlada aynu jaarka nahay ee Somalia, iyagoo kusoo qaaday dagaal ay soo dhex marayaan maamul goboleedyada ka amar qaata iyo diblumaasiyad caalami ah.
Intaa waxaa sii dheer dagaal beleedyo ka curtay dalka gudihiisa, dagaalkasoo sababay dhimasho iyo dhaawac,
Dowladii aynu dooranay ee uu hogaaminayay madaxwayne muuse umay suurta galin inay soo afjaraan shaqaaqada ka taagan beelaha ku diriraya dalka gudihiisa.
Waxaa kaloo aan indhaha laga qarsin Karin wali waxaa taagan hadaladii xanafta lahaa ee
laga dhaxlay doorashadii madaxtooyada.
Waxaynu manta aragna inaynu dib ugu noqonayno xaladihii aynu soo dhaafnay dhowr iyo sagaashankii, waxaana u sabab ah bulshadan tv ga taagan ee isu jawaabaya kuna tiraabaya hadalo wiiqaya nabad galyada uu qarankan ku soo caana maalay.
Xaladahaas aan soo sheegnay waxaa dhaliyay dowladii aynu dooranay oo noqotay dowlad horumarkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda siyaasadeed aan hargeisa soo dhaafin.
Intii la doortay madaxwayne muuse iyo saylici dadka gobolada bari waxay tabayaan adeegii bulshada ee ay xaqa u lahayeen.
Dalkan dowladisa madaxdeeda iyo dhaqaalihii dalka kazoo xaroonayay dhamaan waxay isku weheshadeen magaalada hargaisa.
Guntii iyo gunaanadka ka madaxwayne mustaqbal ahaan waxan madaxwayne muuse ugu baaqayaa inuu sidan dalka ku jiro wax ka badalo.
Dalkan dhaqankoodii dadka kala ququbaya xalkii lagaga hortagi lahaa inaad la timaado. Dowladnimadii